HOME » पछिल्लो २४ घण्टाका समाचार
काठमाडौँ। मनसुनी न्यून चापीय रेखा नेपालको दक्षिण भू–भागमा अवस्थित रहेकाले आगामी तीन दिन देशभर मध्यमदेखि भारी वर्षा हुनसक्ने जनाइएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् राजु प्रधानाङले यो समयमा मनसुनी ‘ट्रफ’ कहीले तल कहिले माथि भइरहने जानकारी दिँदै न्यून…
१५ वर्षकी बालिकालाई ३ जनाले गरे बलात्कार, गर्भ रहेपछि गर्भपतन समेत गराए
बलात्कार पीडित एक बालिकाले बलात्कार भएको लामो समयपछि अहिले आएर बलात्कारको उजुरी गरेकी छिन् । यो अवधिमा ती बालिका गर्भवती भइन् । उनी गर्भवती भएपछि ती बलात्कारीहरुले उनको गर्भपतनसमेत गराएको आज तकको समाचारमा उल्लेख छ । घटना भारतको उत्तर प्रदेशको…
मदिराले लठ्ठ छोराले गरे आफ्नै बुबाको हत्या, आमा घाईते
कैलाली। आफ्नै बुबा ७५ वर्षीय काल्चे रावतलाई हँसिया प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा घोडाघोडी नगरपालिका–११ सिसैया टोल बस्ने ५५ वर्षीय उदय रावतलाई सोमबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। रावतले मादक पदार्थ सेवन गरी आफ्नै बुबाको हत्या गरेको र आमालाई समेत…
सरकार विरुद्ध आन्दोलन चर्काउने कांग्रेस सभापति देउवाको चेतावनी
कााठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। सभापति देउवाले मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धि विधेयक परिमार्जन नगरे संसद बैठक नै अवरुद्ध पार्ने पार्टीको अडान पनि दोहोर्याए। विपी जयन्तिको अवसर पारेर…
साहित्यमा बिपीको विशिष्ट योगदान
वासुदेव पौडेल पोखरा । नेपाली राजनीतिमा सबैले सधैँ लिने नाम मध्येको एक हो बिपी कोइराला । विश्व राजनीतिमा नै चर्चित कोइरालाको जीवनको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो साहित्य । नेपाली साहित्यमा उनको योगदानलाई अत्यन्त महत्वका साथ लिइन्छ । नेपाली साहित्यमा…
एक वर्षको अवधीमा दुर्घटनामा परी तनहुँमा ६१ जनाको मृत्यु
दमौली । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ तनहुँ जिल्लामा ६१ जनाले दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका छन्। जिल्लाको विभिन्न भागमा भएका १०६ दुर्घटनामा परी उनीहरुको ज्यान गएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ११२ दुर्घटनामा ६५ जनाको मृत्यु भएको थियो। तनहुँ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी…
भारतीय नागरिकबाटै ठगिन थाले नेपाली, माल्टा लैजान्छु भन्दै लाखौं ठगी गर्ने राहुल पाण्डे पक्राउ
काठमाडौं। माल्टा लैजान्छु भनी नक्कली भिषा दिलाई ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न भारत उत्तर प्रदेश दिल्ली घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका–९ सिनामंगल बस्ने २३ बर्षीय राहुल पाण्डेलाई काठमाडौं महानगरपालिका–१२ टेकुबाट शुक्रबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पाण्डेले भिभि इन्टरनेशनल प्रालि…
बीबीसी। होरमुजको खाडी विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण समुद्री बाटो हो। इरान र अमेरिकाबीच बढ्दो तनावले यसको महत्व झन बढेर गएको छ। इरान, अमेरिका र उसका सहयोगी देशबीच तनावको केन्द्र अब होरमुज खाडी बनेको छ। यो तनावको सुरुवात…
‘जिदान बैगुनी र धोकेबाज हुन्’
काठमाडौं। जिनेदिन जिदानले २ दिनअघि पत्रकार सम्मेलनमा वेल्सका फरवार्ड ग्यारेथ बेलले रियल मड्रिड छाड्दा राम्रो हुने बताएका थिए । उनले भनेका थिए ‘म चाहन्छु कि बेलले बोलि नै रियल छाडुन् ।’ उनको यो भनाइको बेलका एजेन्टले कडा आलोचना गरेका छन्…
प्यालेस्टाइन । जेरुसेलमको दक्षिणतर्फ इजरायलको भनाईमा “गैरकानुनी रुपमा बनाइएका” प्यालेस्टिनी समुदायका घरहरु सोमबार बिहानैदेखि इजरायली सेनाले भत्काउन शुरु गरेको छ । घर भत्काइएको उक्त घटनाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै चासो व्यक्त गरिएको छ। इजरायली सुरक्षा घेरानजिकैको सुर बाहेर इलाकाका चार वटा भवनलाई…
पिएसजीको अफरले एम्बाप्पेलाई धर्मसंकट, एकातिर पैसाको वर्षा अर्कोतिर उज्वल भविष्य
काठमाडौं। पिएसजीका फ्रेन्च स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे धर्मसंकटमा परेका छन् । पिएसजीले उनको लागि ल्याएको नयाँ अफरका कारण उनी क्लव छाड्ने कि क्लवमै रहने भन्ने अन्योलमा छन् । पिएसजीले एम्बाप्पेको लागि अप्रत्याशित अफर ल्याएको छ जुन अफरले विश्व फुटबल आश्चर्यचकित छ…
५० हजार टन चामल उत्तर कोरिया पठाउने दक्षिणको तयारी
सियोल । दक्षिण कोरियाले यसै महिना उत्तर कोरियाका लागि खाद्यान्न सहयोगको पहिलो खेप पठाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको दक्षिण कोरियाली एकीकरण मन्त्रालयले जनाएको छ। गत महिना सियोलले उत्तर कोरियालाई विश्व खाद्य कार्यक्रम मार्फत ५० हजार टन चामल उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको…
रातको समयमा एक्ली महिलाको कार बिग्रियो, ३ किशोरले ८ किलोमिटर धकेलेर घर पुर्याए
वाशिङटन। अमेरिकाको नियाग्रा फल्स नजिकै हाइवेमा एक महिलाको कार अबेर रातको समयमा बिग्रियो । रातको समयमा गाडी बिग्रिएपछि ती महिला निकै समस्यामा परिन् । उनी आत्तिइन् । त्यही बेला ३ जना किशोरहरु भगवान बनेर उनको सहयोगको लागि आइपुगे । ती…
जापानले नेपाली कामदार लैजान भाषा र सीपसम्बन्धी परीक्षा कार्तिकबाट सुरु गर्ने
काठमाडौँ । जापानमा नेपाली कामदार पठाउन आवश्यक भाषा र सीपसम्बन्धी परीक्षा कार्तिक (अक्टोबरको अन्तिम साता) बाट सुरु गर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। जापान सरकारले शुरूमा अरूको हेरचार गर्ने 'केयरगिभर' का रूपमा कामदार लिन चाहेकाले त्यसैअनुसार भाषा परीक्षाको तयारी भइरहेको मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दहालले…
युवकले आफ्नो जिब्रो काटेर शिवलिंगमा चढाए
कोरबा। अन्धविश्वासले ग्रस्त एक युवकले आफ्नो जिब्रो काटेर शिवलिंगमा चढाएका छन् । भारतको छत्तीसगढ राज्यको कोरबा जिल्लाका लक्ष्मी प्रसाद नामका युवकले यस्तो गरेका हुन् । स्थानीयका अनुसार लक्ष्मी प्रसाद शिवभक्त हुन् । उनी नियमित शिवको आराधना गछृन् । आइतबार उनी…
चाणक्यले राजनीतिलाई राज्य चलाउने नीति भनेर व्याख्या गरेका छन्। तर, बेला बेलामा सत्तामा पुग्नकालागि प्राचीन समयमा पनि राजनीतिमा साम, दाम, दण्ड, भेदको प्रयोग गरिँदै आएको दृष्टान्त छन्। कालान्तरमा यो परम्परा नै बन्यो र राजनीतिमा सत्ता प्राप्ति नै राजनीति गर्नुको अन्तिम…
विश्वकप एशिया फाइनलः पहिलो खेलमा सिंगापुर विजयी, नेपालको पहिलो खेल भोलि
काठमाडौं। टि–२० विश्वकप छनोटको एशिया क्वालिफायर अन्तर्गत आज भएको पहिलो खेलमा सिंगापुर विजयी भएको छ । आयोजक सिंगापुरले कतारलाई ३३ रनले पराजित गरेको हो । घरेलु मैदान इण्डियन एसोसिएसन ग्राउण्डमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको सिंगापुरले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेटको…
नेकपामा स्कुल विभागमा किन कुरा मिलेन ?
काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपाले जिल्ला इन्चार्ज र सह–इन्चार्जको नाम र जिम्मेवारी टुंगो लगाएपनि विभाग गठन भने गर्न सकेको छैन। आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले ७७ जिल्ला र ६ महानगरको इन्चार्ज र सह–इन्चार्जको टंगो लगाएको हो। आइतबार नै विभागको जिम्मेवारी टुंगो लगाउने…
पवित्र तीर्थस्थल देवघाट धाममा भक्तजनको भीड
चितवन । पवित्र तीर्थस्थल देवघाट धाममा साउनको पहिलो सोमबार आज स्नान गर्न आउने भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। आइतबार देखिनै देवघाट आएर रात बिताइ बिहान सबेरै स्नान र पूजापाठ गर्ने ठूलो सङ्ख्यामा रहेका छन्। देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष शिवराज पौडेलका अनुसार…
अमेरिका भ्रमणमा गएका इमरान खानको सम्बोधनको बीचमा नाराबाजी
वाशिङटन। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान अमेरिका भ्रमणमा छन् । आज उनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेट्ने कार्यक्रम छ । यसअघि हिजो इमरानले पाकिस्तानी मूलका अमेरिकीहरुलाई सम्बोधन गरेका थिए । यो सम्बोधनमा बलोच कार्यकर्ताहरुले बलुचिस्तानको स्वतन्त्रताको नारा लगाएका छन् । नाराबाजीपछि सुरक्षाकर्मीले…
निर्माणाधीन मन्दिरको छत खसेर २ जनाको मृत्यु
पाँचथर । पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका–७ भारपाको टारी भन्ने स्थानमा निर्माणाधीन मन्दिरको छतले च्याप्पिएर दुई जनाको मृत्यु भएको छ। स्थानीय अर्जुन रिजालका अनुसार आज बिहान करीब ९ बजे निर्माणाधीन मन्दिरको छतको सटिङ खुस्काउने क्रममा मन्दिरको पूरै छत खसेर किच्दा स्थानीय जगतबहादुर…
धादिङ। पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत धादिङको थाक्रे गाउँपालिका–१ खयरघारीमा आज बिहान यात्रुबाहक बससँग ठोक्किएर माइक्रो खोलामा खस्दा १२ घाइते भएका छन्। चितवनबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बा ५ ख २१५१ नम्बरको माइक्रो विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको लु २ ख २१३४ नम्बरको बस एकापसमा ठोक्किएर…
नेपालगञ्ज। पर्यटन गन्तव्यको केन्द्रबिन्दुलाई प्रमुख आधार बनाएर नेपालगञ्जमा स्थापना गरिएका ठूला सुविधा सम्पन्न होटल व्यवसायको कारोवार पछिल्लो समयमा ओरालो लाग्न थालेको छ। नेपालगञ्ज हुँदै कैलाशमान सरोवर, बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, प्यूठानको स्वर्गद्वारी आश्रम, मुगुको रारा ताल, डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो…
हिमांशु चौधरी जनकपुरधाम । मिथिलाञ्चलमा मैथिल महिलाको सांस्कृतिक पर्व मधुश्रावणी आजदेखि शुरु भएको छ। सामाजिक सांस्कृतिक परम्परामा आधारित यो पर्व वैवाहिक जीवनको प्रवेशमा पहिलो वर्ष धुमधामसँग मनाइन्छ भने त्यसपछि प्रत्येक वर्ष सो अवसरमा कथा सुन्ने सुनाउने परम्परा रहेको छ। तेह्र…
पूर्णप्रसाद मिश्र काठमाडौँ । साउन महिनाको पहिलो सोमबार बिहानैदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत देशभरका शिवालयमा पूजाआजा एवं दर्शन गर्ने भक्तजनको भीड लागेको छ । साउने सोमबारका अवसरमा बिहान ३ बजेदेखि नै पशुपतिका चारै ढोका खोलिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा…
बीबीसी। ३ जुलाई, १९९९ मा टाइगर हिलमा मा हिउँ परिरहेको थियो। राति साढे नौ बजे अप्स रुममा फोनको घन्टी बज्यो। अपरेटरले भने– कोर कमाण्डर नजरल किशन पाल मेजर जनरल मोहन्दिर पुरीसँग तत्काल कुरा गर्न चाहन्छन्।’ दुई जनाबीच केही मिनेटसम्म भएको…
रामजानकी मन्दिर नजिकै भारतीय नागरिकको घाँटी रेटेर हत्या
सुनसरी । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–२ बजार क्षेत्रमा रहेको रामजानकी मन्दिर नजिक आज बिहान घाँटी रेटी एक भारतीय नागरिकको हत्या गरिएको छ। भारत अररीया जिल्ला मानिकपुर घर भएका करीब ४० वर्षीय बिलु यादवको घाँटी रेटी हत्या गरिएको सुनसरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक…
बाढीले पोखरा विजयपुरको डाइभर्सनमा पुनः क्षति
पोखरा । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा प्रवेशको मुख्यद्वार पोखरा महानगरपालिका–१४ र २६ जोड्ने गरी विजयपुरमा निर्माण गरिएको डाइभर्सनमा बाढीले पुनः क्षति पुर्याएको छ । आइतबार रातिको बाढीले डाइर्भसनमा क्षति पुर्याउँदा आज बिहानबाट ठूला यातायातका साधन अवरुद्ध बनेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका…
सोनाक्षी सिन्हा विवादमा फसिन्
मुम्बई। सोनाक्षी सिन्हाको फिल्म खानदानी शफाखाना विवादमा परेको छ। दिल्लीका सेक्सोलोजिस्ट डा. बिजय एबटले उच्च अदालतमा स्टे अर्डर दाबी गर्दै निवेदन दिएका छन्। जसमा उनले फिल्ममाथि रोक लगाउन माग गरेका छन्। डा. बिजयले टी सीरीज र फिल्मका निर्देशकलाई पनि सूचना…
२ करोड ४२ लाखमा निर्माण भएको सिँचाइ कुलो एक महिनामै भत्कियो
बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका–११ बल्थलीका किसानले प्रयोग गर्दै आएको सिँचाइ कुलो अविरल वर्षाका कारण माथिबाट गएको पहिरोले भत्किएको छ। एशियाली विकास बैंकको रु दुई करोड ४२ लाखको आर्थिक सहयोगमा पक्की निर्माण गरिएको सो सिँचाइ कुलो ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सम्पन्न…
शिष्यले गुरुलाई भने–सफलताको बाटो बताउनुस्, गुरुले भने–पहिला मेरो बाख्रो बाँध
काठमाडौं। एक शिष्यले आफ्नो गुरुसँग भने–गुरुजी म सफल बन्न चाहन्छु। मलाइ सफलताको बाटो बताउनुस्।’ गुरुजीले शिष्यसँग भने–ठिक छ, म तिमीलाई सफलताको बाटो बताउँछु। तर पहिला तिमी मेरो बाख्रोलाई दाम्लोले बाँधिदेउ।’ यति भनेर गुरुले बाख्रो बाँधेको डोरी शिष्यलाई दिए। त्यो बाख्रो…
सैनामैनाका सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना प्रविधिका डिजिटल उपकरण वितरण
बुटवल । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना प्रविधिका डिजिटल उपकरण वितरण गरेको छ।नगरपालिकाकाले १८ सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना प्रविधिका डिजिटल उपकरण वितरण गरेको सैनामैना नगरपालिकाले जनाएको छ। रु एक करोड ७४ लाख ८९ हजार लगानीमा नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका लागि…
सक्रिय बन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस
काठमाडौँ। कमजोर प्रतिपक्षको आरोप खेप्दै आएको नेपाली कांग्रेस सक्रिय बन्न थालेको छ। गत संसदीय निर्वाचनमा नरम्रोसँग पराजित भएपछि आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिएको कांग्रेस पछिल्लो समय सक्रिय बन्न थालेको छ। पहिलो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियान सम्पन्न गरेको कांग्रेसले पार्टी संगठनलाई सक्रिय बनाउन…
रअ प्रमुख गाेयल काठमाडाैंमा, हायात होटलको कोठा नं ३ सय २४ बसेर के गर्दैछन्?
काठमाडौं। भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख समान्तकुमार गोयल आइतबार नेपाल आएका छन्। गोयलसहित पाँच जनाको टोली आइतबार दिउँसो काठमाडौं आएको हो। गोयल नेतृत्वको टोली पाँचदिने भ्रमणका लागि नेपाल आएको सुरक्षा निकायको उच्चस्रोतले जनाएको छ। ‘तत्कालका…
एक वर्षमा मोरङबाट मात्रै २९ हजारले लिए नयाँ नागरिकता
मोरङ । मोरङ जिल्लाबाट एक वर्षको अवधिमा २९ हजार ८९६ ले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका छन्। जसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट १४ हजार २५५, इलाका प्रशासन कार्यालय उर्लाबारीबाट सात हजार २६० र इलाका प्रशासन कार्यालय रङ्गेलीबाट चार हजार ४६६ ले सो…
सोमबार : शुभ अशुभ कस्तो छ तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल
आज मिति २०७६ साल साउन ६ गते । तदनुसार सन् २०१९ जुलाई २२ तारिख । शकसंवत् १९४१, परिधावी संवत्सर, दक्षिणायन, वर्षा ऋतु । नेपाल संवत् ११३९ दिल्लागा, श्रावण कृष्णपक्ष, पञ्चमी, १०ः४४ उप्रान्त षष्ठी तिथि सोमबार । मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) नयाँ कामका…
विवादित अमेरिकी अल्पसङ्ख्यक महिला सांसदले ‘राष्ट्रसँग माफी माग्नुपर्छ’: ट्रम्प
वासिङ्टन, अमेरिका । डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट अमेरिकी कङ्ग्रेस (संसद) मा प्रतिनिधित्व गर्ने चार जना सांसदले उनीहरूले व्यक्त गरेका ‘घृणाजन्य कुरा’लाई लिएर अमेरिकासँग क्षमा माग्नुपर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बताएका छन्। आइतबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, “मेरो विचारमा ती…
जापानको माथिल्लो सदनका लागि ४७ हजार निर्वाचन केन्द्रबाट मतदान
टोकियो । जापानमा माथिल्लो सदनका लागि आइतबार देशव्यापी मतदान भएको छ। यो निर्वाचनलाई प्रधानमन्त्री सिन्जे आवेको छ वर्ष छ महिनाको अहिलेसम्मको कार्यकालका बारेमा आम नागरिकको धारणा मापन गर्ने अवसरका रुपमा पनि हेरिएको छ। मतदानका लागि देशभर ४७ हजार मतदान केन्द्र…
वासिङ्टन, अमेरिका । अमेरिकामा तातो हावाका कारण छ जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । तीमध्ये चार जनाको पूर्वी राज्य मेरील्याण्डमा, एक जनाको पश्चिमी राज्य एरिजोनामा र अर्का एक जनाको मध्य क्षेत्रको राज्य अर्कान्सासमा भएको हो । अमेरिकी फुटबल खेलाडी…
बालिकालाई जबर्जस्ती बलात्कार गर्ने अभियुक्त दश वर्षका लागि कारागार चलान
खोटाङ । बालिकालाई जबर्जस्ती बलात्कार गरेको मुद्दामा दोषी ठहरिएका साकेला गाउँपालिका–५ मात्तिम (साबिकको मात्तिम–७) का ३४ वर्षीय तेजबहादुर राई कारागार चलान भएका छन्। २०६६ साल असार २३ गते एक बालिकालाई जबर्जस्ती बलात्कार गर्ने राई आइतबार कारागार चलान भएका हुन्। शुक्रबार…
सुभानु आचार्य ललितपुर । नेपालका २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका महिलामा विषादीको बढी सङ्क्रमण देखिएको छ। तरकारी, फलफूल, खोर, गोठलगायत विभिन्न क्षेत्रमा बढी नै महिलाले काम गर्ने तर यी वस्तुमा विषादीको प्रयोग गर्दा कुनै सावधानी नअपनाउने गरेका कारण महिलामा…
ब्रिगेड ब्वाईज च्याम्पियन
काठमाडौं । ब्रिगेड ब्वाईज क्लबले चौंथो संस्करणको ललित स्मृति कप यू–१८ च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि जितेको छ । आइतबार भएको फाइनलमा विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई १–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै ब्रिगेड च्याम्पियन बनेको हो । ललितपुरको सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा ब्रिगेडलाई…
दाङ्गमा जंगली च्याउ खाँदा तीन जना बिरामी
दाङ्ग । जङ्गली च्याउ खाँदा तीन जना बिरामी भएका छन्। च्याउ खाँदा घोराही उपमहानगरपालिका–१७ भैसाहीका ६८ वर्षीया दुर्गा रेग्मी, उनका ३१ वर्षीय छोरा जीवराज र २० वर्षीया छोरी संगीता बिरामी परेका हुन्। प्रहरी नायब उपरीक्षक विनोदविक्रम शाहका अनुसार दुर्गा र…
भेनेजुएलामा भएको असंलग्न राष्ट्रहरुको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा नेपाल सहभागी
काठमाडौं। भेनेजुएलाको काराकासमा सम्पन्न असंलग्न राष्ट्रहरुको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा नेपालले पनि सहभागिता जनाएको छ । असंलग्न आन्दोलन अंगिकार गरेका देशहरुका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व सँयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि डा. अमृतबहादुर राईले गरेका हुन् । काराकासमा यही जूलाई १८…
प्रधानमन्त्रीसँग बङ्गलादेशका सैनिक टोलीको शिष्टाचार भेट
काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेको बङ्गलादेशको प्रतिरक्षा बल (एनडिएफ) ले नेतृत्व गरेको सैनिक टोलीले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको सो भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा तथा आतङ्वाद विरुद्धका साझा…
उत्तर कोरियामा स्थानीय निर्वाचनका लागि भएको चुनावमा करिब शतप्रतिशत मतदान
प्योङयाङ (रासस/सिन्ह्वा) । पजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया (उत्तर कोरिया) मा आइतबार स्थानीय स्तरको जनप्रतिनिधि चयनका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । प्रान्त, शहर तथा जिल्लास्तरीय नेतृत्व चयनका लागि स्थानीय समय अनुसार बिहान ९ बजेदेखि मतदान शुरू भै दिनभर मतदान भएको उत्तर…
काठमाडौं। भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी हाल क्रिकेटको दुनियाबाट २ महिनाको विदामा छन्। उनी यो विदा आरामका लागि भने लिएका होइनन्। भारतीय सेनाको मानर्थ सदस्य रहेका धोनीले यो दुई महिना आर्मीको तामिल लिने छन् । धोनीले लिने…
वालुवाटार जग्गा प्रकरणः अख्तियारले हालसम्म नबोलाएको गच्छदारको दावी
काठमाडौं। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारको जग्गा अपचल काण्डमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्म आफुसँग कुनै सम्पर्क नगरेको काँग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले बताएका छन् । दिल्ली भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएका नेता गच्छदारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बालुवाटार…
बेनिशा हमाललाई ‘चेली मेकअप स्टुडियो’मा दिउँसै भूतले तर्साएपछि....
काठमाडौं । अभिनेत्री बेनिशा हमाललाई शनिबार काठमाडौंको कालिमाटी स्थित ‘चेली मेकअप स्टुडियो’मा दिउँसै भूतले तर्सायो। स्टुडियोका वार्षिक उत्सबमा विशिष्ट अतिथि बनेर पुगेकी बेनिशालाई स्वागत गर्ने क्रममा भूतको रुपमा आएका कलाकारले तर्साएका हुन्। कलाकार तथा पत्रकार सरिता भारती नाच्दै जब भूत…
यतिबेला दाङ, रुपन्देहीलगायतका क्षेत्रमा वर्षा भइरहेको छ, के छ ३ दिनको मौसमी पूर्वानुमान?
काठमाडौं। यतिबेला पश्चिम तराईमा वर्षा भइरहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आइतबार बेलुका ८ बजेपछि दाङ, रुपन्देहीलगायतका क्षेत्रहरुमा वर्षा भइरहेको छ । आइतबार बेलुका पौने नौ बजे मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले दिएको जानकारी अनुसार पोखरा,…
दाङमा सिँचाई पोखरीमा डुबेर ३ किशोरीको मृत्यु
दाङ । दाङमा सिँचाई पोखरीमा डुबेर ३ जना किशोरीको मृत्यु भएको छ। आइतबार साँझ पौने ८ बजे खेतमा रोपाइँ सकेर घर फर्कने बेला हातखुट्टा धुने क्रममा पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ्गले जनाएको छ। डिसी नेपालसंग कुरा गर्दै…
काठमाडौं। नेपालमा हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) लाई लक्षित गरी निर्माण गरिएको लनटेनिस कोर्ट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले आइतबार हस्तान्तरण गरेको छ । सातदोबाटोस्थित टेनिस कम्प्लेक्सलगायत अन्य पूर्वाधारको निरीक्षण गर्न सातदोबाटो पुगेका सदस्य–सचिव सिलवालले निर्माण सम्पन्न भइसके…
काठमाडौं । रेगन श्रेष्ठले प्रथम चमुण्डा अल नेपाल स्नुकर च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेका छन् । रेगनले फाइनलमा राजन लामालाई ७–४ को फ्रेममा पराजित गरे । उपाधिसंगै रेगनले २ लाख तथा राजनले ७५ हजार नगद पुरस्कार पाए । सोम लामा र निर्माण…
दार्चुलामा साढे चार सय मुक्त हलियाको पुनःस्थापना
दार्चुला । जिल्लाका साढे चार सय मुक्त हलियाको पुनःस्थापना गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० बाट जिल्लामा हलिया मुक्ति पुनःस्थापना शुरु गरिएको हो। जिल्लामा ४३४ जना हलियाको पुनःस्थापना गरिएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ। साविक सुदूर र मध्यपश्चिमका १२ जिल्लामा हलिया रहेका…
भिसिटीएस लागु गर्न लचिलो बन्दै सरकार, कार्यदल गठन गर्ने सहमति
काठमाडौं। सरकारले ‘माल बस्तु तथा ढुवानी साधनको वेबमा आधारित अनुगमन प्रणाली (भिसिटीएस)’ लागू गराउन देखिएको व्यवहारिक कठिनाई हल गर्न पाँच सदस्यीय कार्य दल गठन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरुसँग आइतबार छलफल…
कपडाले कम्मरमा बाँधेर ल्याएको २ किलो सुनसहित प्रहरीको फन्दामा परे भीमबहादुर
काठमाडौं । काठमाडौँको नागढुङ्गाबाट दुई किलो सुनसहित एक जना पक्राउ परेका छन्। भैरहवाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको लु २ ख ६५२ नंको यात्रुवाहक बस जाँच गर्ने क्रममा रसुवा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–५ स्याफ्रुबेँसी घर भएका भीमबहादुर तामाङ पक्राउ परेका हुन्। कपडाले कम्मरमा बाँधेर…
नेकपामा विभागको लफडाः वामदेव भर्सेज नारायणकाजी (भिडियो)
काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपा बनेको एक वर्ष पूरा भए १४ औं महिनामा लाग्दा पनि पार्टीका विभागबारे टुंगो लागेको छैन । पार्टीका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच विभाग गठनका विषयमा अनौपचारिक सहमति जुटेको बताइए पनि यो विषय नेकपामा…
कसरी हुन्छ बर्षातको पानी संकलन र कसरी हुन्छ प्रकोप न्यूनीकरण?
काठमाडौं । बर्षाको पानीलाई संकलन र व्यवस्थापन गरी घरायसी आवश्यकता पूरा गर्ने र पानीका कारण उत्पन्न हुने पहिरो र बाढीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई जागरुक बनाउने उद्देश्यले राजधानी कामठाडौंमा राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ । स्मार्ट वास…
सभामुख महराको निर्णय क्षमतामा नै ह्रास आयो : मिन विश्वकर्मा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री मिन बहादुर बिश्वकर्माले साउन ८ गतेको संसद बैठक चल्ने वा नचल्ने भन्ने कुरा सभामुख कृष्णबहादुर महराको भूमिकामा निर्भर पर्ने स्पष्ट पारेका छन्। काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘साउन ८ गतेको…
काठमाडौं। अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल र निर्माता छविराज ओझाको विवादमा नयाँ ट्वीस्ट आएको छ । अब यी दुवै जना जेल जानुपर्ने हुन सक्छ । छविले आफूलाई यातना दिएको भन्दै प्रहरीमा पुगेकी शिल्पाले न्याय मागिरहेका बेला अब उनी नै जेल पुग्ने स्थिति…
प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस ईतिहासकै कमजोर, निकम्मा भयो : रायमाझी
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले नेपालको संसदीय ईतिहासमै अहिलेकोजस्तो कमजोर प्रतिपक्षी कहिल्यै नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई निकम्माको संज्ञा दिएका छन्। आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना…
राजापाको संयोजकमा यादव
काठमाडौं। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को अध्यक्ष मण्डलको नयाँ संयोजकको जिम्मेबारी राजकिशोर यादवले पाएका छन् । नयाँ संयोजक यादवले सोमबारदेखि संयोजकको जिम्मेबारी सम्हाल्ने राजापाले जनाएको छ । आइतबार संयोजक अनिल झाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यादवलाई संयोजक तोकेको राजापाले जारी गरेको…
विश्वकप फाइनलमा ओभरथ्रोमा ५ को ठाउँमा ६ रन दिने अम्पायर धर्मसेनाले गल्ती स्वीकारे
काठमाडौं। विश्वकप फाइनलमा न्यूजिल्याण्डका मार्टिन गुप्टिलको ओभरथ्रोमा इङल्याण्डलाई ६ रन दिने अम्पायर कुमार धर्मसेनाले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन् । श्रीलंकाका पूर्व क्रिकेटर धर्मसेनाले भने ‘ओभरथ्रोको क्रममा दुवै ब्याट्सम्यानले एक अर्कालाई क्रस गरेका थिएनन् । मबाट निर्णयमा गल्ती भयो…
गीत-संगीतको क्षेत्रमा अरुण थापाको योगदान अतुलनीय छ : मन्त्री मगर
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री विना मगरले नेपाली गीत-संगीतमा स्व. अरुण थापाले दिएको योगदान अतुलनीय भएको बताएकी छन्। आइतबार राजधानीमा आयोजना गरिएको स्व. थापाको स्मृति सभामा बोल्दै मन्त्री मगरले अरुण थापा जस्तो चर्चित तथा लोकप्रिय गायकको सम्झना सबैले गर्नुपर्ने र गीत…
काठमाडौंमा आप्रवासी कामदारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने
काठमाडौं । नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षणसम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगामी कार्तिकको २६, २७ र २८ गते काठमाडौंमा सो सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको जानकारी गराएको हो। आईतबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगका अध्यक्ष अनुपराज…
नेकपाले टुंग्यायो जिल्ला इन्चार्ज र सह–इन्चार्ज (सूचीसहित)
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले ७७ जिल्ला इन्चार्ज र सह इन्चार्ज तथा ६ वटा महानगर कमिटिको इन्चार्ज र सह इन्चार्जको टुंगो लगाएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालयले इन्चार्ज र सहइन्चार्जबारे निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी…
धोनीका विषयमा मुख्य छनोटकर्ताको ठूलो बयान, अब धोनी टिममा फर्कन मुस्किल
काठमाडौं। अखिल भारतीय राष्ट्रिय चयन समितिले वेष्ट इण्डिज टुरको लागि आइतबार मुम्बइमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय टिमको घोषणा गरेको छ । विराट कोहली तीनवटै फर्म्याटमा भारतका कप्तान हुनेछन् । सिरिजमा २ टेस्ट र ३–३ एकदिवसीय तथा टि–२० खेल हुँदैछन् । …
महीनामा एक पटक कलेजो प्रत्यारोपण गर्दै शिक्षण अस्पताल
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पतालले पहिलो चरणमा महीनामा एकपटक कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अस्पतालका प्रा डा रमेशसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा गत जेठ १७ मा पहिलो र यही साउन ३ गते दोस्रो कलेजो प्रत्यारोपण कार्य सम्पन्न भएको थियो। ‘कलेजो…
सिनियर भारतीय खेलाडीले विश्वकपमा कोच र कप्तानलाई छलेर यस्तो गरे, कडा कारवाहीको तयारी
काठमाडौं। भारतीय क्रिकेट टिमका एक सिनियर खेलाडीले कोच र कप्तानको आँखा छलेर नियम उल्लंघन गरेको पाइएको छ । उनले बीसीसीआइको परिवार सम्बन्धित नियमको उल्लंघन गरेका हुन् । विश्वकपका क्रममा यी खेलाडीले आफ्नी श्रीमतीलाई पूरै ७ हप्ता आफूसँगै राखे । नियमअनुसार…
गुठी जग्गाको विवरण माग गर्दै बुझाइयो ज्ञापनपत्र
काठमाडौं। राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिले गुठी संस्थानसँग गुठीको सम्पूर्ण जग्गाको विवरण माग गरेको छ। समितिले आइतबार त्रिपुरेश्वरस्थित गुठी संस्थानको कार्यालयमा पुगेर गुठीको जग्गाको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन माग गरेको हो। समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले संस्थानका अध्यक्ष…
वेष्ट इण्डिज सिरिजका लागि भारतीय टिम घोषणा, धेरै नयाँ खेलाडीले पाए मौका
काठमाडौं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआइले वेष्ट इण्डिज सिरिजका लागि भारतीय टिमको घोषणा गरेको छ । टिममा धेरै युवा खेलाडीले मौका पाएका छन् । छनोट समितिले आज टि–२०, एकदिवसीय र टेस्ट सिरिजको लागि छुट्टछुट्टै टिमको घोषणा गरेको हो । टिममा महेन्द्र…
सञ्चिता घिमिरे काठमाडाैं। बिजुलीबजारस्थित धोबीखोलामा निर्माणाधीन ‘नेटवर्क आर्क ब्रिज’ पुलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपालमा पहिलोपटक ‘नेटवर्क आर्क ब्रिज’ प्रविधिबाट निर्माण भएको पुल आगामी तीन चार महीनामा सम्पन्न हुने काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ। पछिल्लो समय…
सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन :अध्यक्ष राणा
काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष राणाले आइतबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको पार्टीको केन्द्रिय कार्य समिति बैठकमा बोल्दै जनताको भारी मत पाएर बनेको शक्तिशाली सरकारले अपेक्षा…
सन्यास लिने बेला धोनीमाथि लाग्यो गम्भीर आरोप, दिग्गज खेलाडीले खोलिदिए पोल
काठमाडौं। भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान महेन्द्र सिंह धोनीले तत्काल सन्यास नलिने निर्णय गरेका छन् । उनले अबको २ महिना भारतीय सेनामा बिताउने पनि जानकारी दिएका छन् । विश्वकप सेमिफाइनलबाट भारत बाहिरिएसँगै धोनीले सन्यास लिने चर्चा थियो । धोनीले सन्यास नलिने…
काठमाडाैं। नेपाली काङ्ग्रेसले सातै प्रदेशमा पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आज बसेको बैठकले यही साउन १६ गतेदेखि सातै प्रदेशका १२ स्थानमा दुईदिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको…
काठमाडाैं। निजी क्षेत्रको अन्तरराष्ट्रिय वायु सेवा प्रदायक कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले सोमबारदेखि बङ्गलादेशको राजधानी ढाका उडान गर्ने भएको छ। बङ्गलादेशी पर्यटकको नेपाल आगमन सहजतालाई लक्षित गर्दै कम्पनीले काठमाडौँ–ढाका सिधा उडान थाल्ने जनाएको हो। काठमाडौँ–ढाका साताको तीन दिन उडान गर्ने गरी तालिका…
सनी लियोनीले जलपरी बनेर फोटोशूट गराएपछि तात्यो सामाजिक संजाल
मुम्बइ। सनी लियोनी बलिउडमा मात्र नभइ सामाजिक संजालमा पनि स्टार छिन् । उनका केही तस्वीरले पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा निकै चर्चा पाएका छन् । नयाँ फोटोमा सनी जलपरीको लुकमा देखिएकी छिन् । सनीका यी तस्वीर उनको नयाँ फोटोशूटका हुन् । …
‘आमा’मा मुख्य कलाकार परिवर्तन, सूर्यमाला बाहिरिइन् मिथिला भित्रिइन्
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र ‘आमा’मा मुख्य कलाकार परिवर्तन भएको छ । यस चलचित्रको मुख्य कलाकारका रुपमा रहेकी सूर्यमाला शर्मा खनाल परिवर्तन भएकी हुन् । अहिले उनको ठाउँमा मिथिला शर्मा भित्रिएकी छिन् । पारिवारीक कारणले सुर्यमाला विदेश जानुपर्ने भएपछि उनको ठाउँमा मिथिला…